Lube yimpumelelo uhambo lowamafilimu | News24
Lube yimpumelelo uhambo lowamafilimu
PHOTO: supplied USenzo Zindela ese France kwiCannes Festival
LUBE yimpumelelo uhambo luka Mnuz Senzo Zindela ongumuqophi wamafilimu. UMnuz Zindela uthathe uhambo lwakhe lokuya eFrance emasontweni adlule ukuyomela umasipala wesifunda Ugu kanye nesizwe saseNingizimu Afrika kwi Cannes Film Festival.
UMnuz Zindela uthe uthanda ukubonga bonke ababe yingxenye yoxhaso kulolu hambo lwakhe, okubalwa kubona umasiplala omkhulu woGu, i-KwaZulu-Natal Film Commission okuyibona abamunika lelithuba, i-South Coast Chamber of Commerce kanye nabe AFVF.
“Loluhambo lube yimpumelelo kanti futhi lingenze ngaba nokuzithemba. Luphinde langenza ukuthi ngiziqhenye ngemvelaphi yami nokuthi ngikhangise ngeSouth Coast iyonkana.,” kusho uMnuz Zindela.
UMnuz Zindela uthe uthole ithuba lokwakha ubudlelwane nabanye osomafilimu baseziweni abafana no Kao Thaitayar abavumelane nabo ukuthi bazosebenzisana ukuproducer enye yamafilinu eyenziwa inkampani i-Sollywood Films
“Ngaqala ukusebenzisana nobudlelwane nabo ngonyaka ka 2010 lapho badlulela khona ezingeni eliphezulu baze bangimema kweminye yemicimbi yabo owawuseThailand lapho bangazisa noNgqongqoshe wakhona uWorateera Suvarnsorn, okwaba enye yezinto engingasoze ngazikhohlwa,” kusho uMnuz Zindela.
Uthe obunye ubudlelwane akwenzile ukwakha ubuhlobo bokuthi abasezweni lase USA bakwazi ukusebenzisa indawo yaseSouth Coast ukwenza amafilimu abo azayo.
UMnuz Steven Adams, oyinhloko yabaphathi ophinde asebenzisane neBuffalo 8 okwiyona eyaqopha ifilimu u-Thor, Green Lantern, Knowing nezinye, naye uthe akasakwazi ukuzibamba usejahile ukuthi kufike isikhathi lapho ezozizela mathupha eSouth Coast,” kusho uMnuz Zindela.
Kuningi uMnuz Zindela alandise ngakho ngohambo lwakhe kodwa ucizelele ukuthi unethemba lokuthi i-Ugu Film Festival yalonyaka izobe idla ubedu futhi izoba sezingeni eliphezulu kuneminyaka edlule.
Uthe uthanda ukumema osomabhizinisi abanothando lokuba yingxenzye yeUGUFF balisebenzise ithuba lokuba nabo bazakhele ubudlelwane nabanye osomabhizinisi abazobe behambele lo mcimbi.